Blaogin’ny Namana Serasera
Blaogin’ny Namana Serasera Just another weblog
Tonga soa eto amin'ny (blaogy.org). Tahaka ny blaogy.com dia takelaka hanomezana toerana ireo namana ao amin'ny serasera.org mba hametrahany ny blaoginy koa ny eto amin'ny blaogy.org. Malalaka ny safidy na hampiasa ny blaogy.org ianao na hampiasa ny blaogy.com na hampiasa azy roa mihitsy.
Koa mahereza daholo indray ary.
Maro ihany koa ireo zavatra atolotry ny blaogy.org. Midira sy manorata dia ho hitanao.
Raha toa moa ianao mbola tsy mpikambana ao amin'ny serasera dia azonao atao ny misoratra anarana dia miverina eto rehefa avy eo.
sipagasy 2021-03-08 21:35:11
Andron'ny 8 martsa androany, asa raha mbola misy lanjany ihany izany vanim-potoana izany eo @ mpiara monina na tsia. Fa raha tsy nitolona ry Simone Veil sy ny tariny taty Frantsa dia tsy ho tahaka iz... Continue Reading »
Myh'Andry 2019-12-27 06:51:13
ALAHELO Eto am-pamakiana ny andalan-tsoratrao no latsaka ny sento Andalam-pijerena ireo tahirin-tsarinao no teraka ny vetso Dia indreny koa ireny tsiaro fa mitety ny habakabako.... Te hikiaka ... Continue Reading »
Hery Dev - reloaded
Blaogin’ny Namana Serasera. © 2022 All rights reserved.